एकछिन् !! के पत्रिकामा चटपटे खानुहुदैछ ? स्वास्थ्य बिगार्न चाहनुहुन्न भने सुरुमा यो पढ्नुहोस् - ज्ञानविज्ञान
कुनै पनि खानेकुरा पत्रपत्रिकामा राखेर दिनु र पत्रपत्रिकामा पोको पारेर राख्नु हाम्रो समाजमा सामान्य मानिन्छ । तपाईं चटपटे खान जानु बिक्रेताले पत्रपत्रिकामै राखेरै दिन्छ । तात्तातो दुनोट माग्नुहोस् या पकौडा माग्नुहोस्, बिक्रेताले तपाईँलाई पत्रिकामा बेरेर दिन्छ ।
हामी पनि प्रायजसो बाहिर जाँदा पकौडाको पसलमा पत्रपत्रिकामा राखेर खानेकुरा खाने गर्छौ । साथै कतै बाहिर जादाँ केही नसोची नसम्झी पत्रिकामा खाना राखेर लैजाने र पत्रपत्रिकामा नै खाने कुरा खाने गर्छौ ।
यसैगरी मासु पसलेले समेत पत्रिकामै पोको पारेर तपाईँलाई मासु दिन्छ । तर, तपाईँ हामीमध्ये कमैलाई थाहा होला–पत्रपत्रिकामा पोको पारेर दिएको खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका हिसाबले ठिक हुँदैन । झन् त्यस्ता खानेकुरा खाँदा प्राणघातक रोग क्यानसर लाग्छ भन्ने कुरा त हामीमध्ये धेरैलाई थाहा नै छैन् ।
वास्तवमा खाद्य सुरक्षा निकायले यस्तो गर्नेलाई सचेत गराएको छ । निकायले मानिसहरूलाई यसको लागि सावधान गरेको छ कि पत्रिकामा खाना प्याक गर्न वा पत्रिकामा खाना खानु स्वास्थ्य को लागि हानिकारक हुन सक्छ ।
एफ.एस.एस.ऐ.आई.ले बताएको छ की यस्तो गर्नाले मानिसको शरिरमा कैंसर जस्तो घातक रोग उत्पन्न गर्ने खालको कारक तत्त्व प्रवेश गर्दछ । चेतावनी प्राप्त भएको छ र यही चेतावनीको साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा एवंम मावन प्राधिकारणले मानिसको स्वास्थप्रति सचेत गराउँदै पत्रिकामा खाने चीज नराख्ने सल्लाह दिएको छ ।
यसले बताएको छ कि खाना जति पनि स्वास्थ्यवर्धक र स्वस्छ बनेको होस् तर जब यो पत्रिकाको सम्र्पकमा आउँछ तब यो हानिकारक हुन्छ । र, हाम्रो स्वास्थलाई नोक्सान पुयाउँछ ।
पत्रिका छाप्ने बेला प्रयोग हुने मसिमा धेरै प्रकारको खतरनाख ब्याक्टेरिया हुन्छ जसले हाम्रो शरीरमा एक्दमै नराम्रो असर गर्दछ । साथै, प्रकाशन मसि मा पनि नोक्सानदायक कलर, पिगमेंट र परिरक्षक हुन्छ जुन हाम्रो शरीरमा खानाको साथै टाँसिएर भित्र जान्छ जुन कि एक्दमै हानिकारक प्रमाणित हुन सक्छ ।
हो, यदी प्रयोगमा आइसकेका पत्रपत्रिकामा पाको पारेर राखिएका खानेकुरा खाने बानी छ भने आजै त्यागौँ ।
हामीले गर्ने साना मसिना हेलचेक्राइले गर्दा हामीले खानामा किटाणुहरु फैलिएका हुन सक्छन् । खाना पौष्टिकताले पुर्ण छ भने पनि त्यसमा किटाणुहरु भए भने त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्न सक्छ । यसैले खानाको सम्बन्धमा हेलचेक्राइ वा लापरवाही गर्नु हुदैन । हामीलाई थाहा भएका तर लापरवाह गरेका कुराहरुका बारेमा हामीले यहाँ जानकारी दिदैछौ जसको व्यवहारिक प्रयोगले खानामा किटाणुहरुको संक्रमण रोक्न सकिन्छ ।
१. खाना पकाउनु अघि, खाना खानु अगाडि र केटाकेटीलाई खाना खुवाउनु अघि साबुनपानीले राम्ररी हात धुनुहोस् । हात राम्ररी धुनाले रोग फैलन पाउँदैन ।
२. काँचै खाने फलफूल र तरकारीको बोक्रा ताछेर वा राम्ररी धोएर मात्र खानुहोस् । हात पुछ्न एउटा सफा टालो राख्ने गर्नुहोस् ।
३. खानेकुरामा थुकका छिटा पर्न नदिन खाना राखिएको ठाउँमा खोक्ने, थुक्ने, चुइगम र पानजस्ता चिजहरू चपाउने गर्नुहुँदैन ।
४. काँचै खाइने खानेकुरासँग काँचो मासु, माछा आदि राख्नुहुँदैन ।
५. मासु काटिसकेपछि हात, हतियार र अचानो राम्ररी पखाल्नुहोस् ।
६.खानेभाँडाहरू जनावरहरूलाई चाट्न नदिनुहोस् । भरसक जनावरहरूलाई भान्छाकोठामा पस्न नदिनुहोस् ।
७. बिग्रिएको खाने कुरा तुरुन्तै फाल्नुहोस ।
खाना बिग्रनुका केही लक्षणहरू तल दिइएका छन्
१. नमीठो गन्ध ।
२. खानाको रङ्ग परिवर्तन हुनु । (उदाहरणका लागि काँचो मासुको रङ्ग रातोबाट खैरोमा बदलिन्छ ।)
३. नराम्रो गन्धसहित माथिल्लो तहमा धेरै फोका उठ्नु, जस्तै झोल भएका पुराना (बासी) तरकारीहरूमा देखिन्छ ।
४. मासु तथा पकाएको खानेकुराको माथिल्लो तहमा काइ/लेउ जम्नु ।
खाना खादा गरिने गल्तिहरु जसले स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ
कतिपय सामान्य आनीबानीले पनि हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गरिरहेको हुन्छ । जस्तो कि, खाना खाने शैली, नुहाउने तरिका, हिँड्ने, सुत्ने, बस्ने ।
सामान्यतः के भनिन्छ भने स्वस्थ्य जीवनको लागि स्वस्थ्य दिनचर्या पालना गर्नुपर्छ । यसमा कस्तो खाने भन्ने मात्र होइन, कसरी खाने भन्ने कुराले समेत अर्थ राख्छ । कहाँ हिँड्ने भन्ने कुरा मात्र होइन, कसरी हिँड्ने भनने कुराले अर्थ राख्छ । कतिबेला सुत्ने भन्ने कुरा मात्र होइन, कसरी सुत्ने भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।
स्वस्थ्य दिनचर्याका लागि उचित आहार, बिहार र बिचार महत्वपूर्ण हुन्छ । यससँगै खाने तरिका, सुत्ने तरिका, बस्ने तरिका पनि सहि हुनुपर्छ ।
खाना खानसाथ हिँड्नु ठिक कि बेठिक ?
-खाना खानसाथ तुरुन्तै हिँड्नु सहि हुँदैन । किनभने यसले रक्त संचारमा प्रभाव पार्छ । यस्तोमा पाचन प्रक्रिया पनि सहि हुँदैन । खाना खाएको आधा घण्टापछि मात्र टहल्नु राम्रो हो ।
खाना खाए लगत्तै चिया पिउनु ठिक कि बेठिक ?
खाना खानसाथ फलफूल सेवन गर्नु ठिक कि बेठिक ?
– खाना खाएको एक घन्टापछि मात्र फलफूल सेवन गर्न सकिन्छ । खाना खाए लगत्तै फलफूल सेवन गर्दा त्यो पचाउन गाह्रो हुन्छ । त्यसको न्यूटि्रशन शरीरले ग्रहण गर्दैन । फलतः एसिडिटी वा डाइसेसनको समस्या हुनसक्छ ।
के गर्ने सकिन्छ खाना खाए लगत्तै ?
खाना खानसाथ चिया, कफी, पानी पिउनु पनि ठीक हुँदैन । यद्यपी खाना खानुअघि र खाना खाए लगत्तै थोरै पानी पिउनु राम्रो हो, जसले पचाउन मद्दत गर्छ । खाना खाइसकेपछि सुत्नु वा सुत्ने पोजिसनमा बस्नु पनि पाचन यन्त्रको लागि अनुकुल हुँदैन । खानालाई राम्ररी पचाउनका लागि खाना खाए लगत्तै बज्रासनमा बस्नुपर्छ । कम्तिमा पाँच मिनेट यो आसनमा बस्नु राम्रो मानिन्छ ।
त्यसो भए समयमै खाने कि भोक लागेपछि ?
समय अनुसार खाना खाँदाका फाइदा
Don't Miss it पख्नुहोस् !! कस्तो औषधि प्रयोग गर्नुहुदैछ ? प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले यी कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुहोस्
Up Next तपाईलाई के रोग लागेको छ, शरीरले यसरी संकेत दिने गर्दछ – महत्वपूर्ण जानकारी